Isicelo se-ESTA AMERICA - ESTAmerica US ESTA E-Filing Services Traveling
I-VISA WAIVER PROGRAM (VWP)
I-ESTA Visa Waiver Program
Ifayela le-PASSPORT ye-E- File
UHLELO LWAMANZI E-US UKUTHUTHA UKUTHUTHA
Udinga usizo ukuqalisa?
Abafanelekile Abahambeli Basezizwe abafisa ukuhamba e-United States ngaphansi kohlelo lwe-Visa Waiver Program kumele bafake isicelo sokugunyazwa.
Izakhamuzi ezifanelekile noma izizwe:
Uyisakhamuzi noma ufanelekile wezwe lezwe le-Visa Waiver Program.
Uhambo lwakho luyizinsuku ezingu-90 noma ngaphansi.
Uhlela ukuya e-United States ngebhizinisi noma injabulo.
Okwamanje awunalo i-visa yevakashele.
Yikuphi Ulwazi Oludingekayo:
Iphasiwedi evumelekile evela ezweni le-Visa Waiver Program
Ikhadi lesikweletu elifanele (MasterCard, VISA, American Express, futhi Thola ukukhokha imali engu-$ 89 ngemali yesicelo.
Imininingwane yakho yokuxhumana. (Igama, Inombolo Yefoni, Ikheli Lokuthumela, nekheli le-imeyili)
Ikheli kanye nolwazi lokuxhumana lokuhlala kwakho.
Isicelo se-ESTA sichazwe
Yini engidinga ukuyifaka isicelo se-ESTA?
Uzodinga ipasipoti yakho nekhadi lokukhokha ukuhambisa uhlelo lokusebenza. Uhambo lwakho lokuhamba luyizinketho zokuhambisa kodwa lungabalwa. Sicela ubuyekeze i-FAQ yethu yemibuzo evame kakhulu nezimpendulo mayelana nawe Isimo se-ESTA
Izinkokhelo ezenzelwe isicelo se-ESTA. ,
Zonke Izinkokhelo zohlelo lokusebenza lwe-ESTA kufanele ziqaphelwe ngekhadi lesikweletu noma debit. UHulumeni wase-United States awugcini nje ukuhlola noma i-oda lemali yesicelo se-ESTA, bese uyishiya ezinkampanini ezikhethekile ezifana ne-ESTAmerica.org ukusiza nge "Isimo se-elekthroniki sokugunyazwa kokuhamba"Inqubo. Samukela wonke ama-brand ezinkulu wekhadi. Sicela uxhumane nathi uma ungakwazi ukukhokha ngekhadi lesikweletu, kodwa indlela elula inekhadi lesikweletu noma debit.
Udinga ukubuyekeza, uqinisekise, noma uvuselele i-ESTA yakho?
Kunezinkambu ezithile kuphela ezingahle zibuyekezwe ku-ESTA ngemuva kokuthola ukugunyazwa okuvunyelwe ukuhamba. Unconywa kakhulu ukuthi ubuyekeze kahle u-ESTA kahle ngaphambi kohambo lwakho eya e-United States ukuze uzinike isikhathi uma kunesiphambeko nesicelo sakho. Uma unombuzo mayelana nokuthunyelwa, sicela usithumelele nge-imeyili.
Ingabe i-Visa ne-ESTA into efanayo?
Ukugunyazwa kwe-ESTA akuyona i-visa. Kuyinto esandulela ukuhamba ngaphansi kwe-VWP, eyenzelwe ukuvumela abashayeli ukuba bahambisane nenqubo ye-visa yokuchitha isikhathi. I Ukugunyazwa kwe-ESTA akulingani ne-visa yase-United States nganoma iyiphi indlela, futhi ngeke ishintshwe i-visa ezimweni lapho kudingeka khona i-visa yokuhamba. Awudingi i-ESTA uma usuvele unayo i-visa evumelekile.
I-ESTA ne-VWP Ulwazi
Izinhlelo ze-ESTA zenziwe kuphela ku-inthanethi.
Imininingwane yezinhlelo zokusebenza ze-Vital zifaka phakathi ipasipoti kanye nolwazi lokukhokha. Uhambo lwakho lokuhamba luyizinketho futhi lungabuyekezwa kamuva. Zonke izinkambu ezigunyaziwe kumele zigcwaliswe futhi zigcwaliswe ngendlela efanele. I-United States ayithathi amasheke noma ama-oda e-ESTA. Ishiywe ezinkampanini ezifana ne-ESTAmerica.org ukusiza nokusiza izakhamuzi ezweni lakho eligcwalisa ifomu ngokunembile.
Ubani Okudingeka Asebenzise I-ESTA?
Noma ubani ongena e-United States ngaphansi kohlelo lwe-Visa Waiver Program. Lokhu kuvumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMakhaya ukuthi uvume ngaphambilini abavakashele i-Visa Waiver ngaphambi kokuba bashiye amazwe abo. Khetha kuphela Amazwe yizizwe zama-Visa Waiver, futhi uzothola lolu hlu ngaphansi kweThe (VWC) ikhasi.
Isicelo esisha se-ESTA
Bonke abahamba ngezimpahla ezivela emazweni e-Visa Waiver bafanele ukufaka isicelo
I-ESTA ingatholakala kuphela ku-intanethi
Kuthatha ngaphansi kwemizuzu engu-10 ukuqedela isicelo
Amahora we-72 wokucubungula isikhathi noma ngaphansi
Buyekeza uhlelo lokusebenza lwe-ESTA
Buyekeza ikheli lokuhlala e-US
Buyekeza ikheli le-imeyili elisetshenziselwa isicelo sakho se-ESTA
Buyekeza usuku lwakho lokuphela kwe-ESTA
Qinisekisa imininingwane yesicelo sakho se-ESTA kahle ngaphambi kokuhamba
Buyekeza imininingwane yakho yamanje yamaphasipoti
Buyekeza noma iyiphi idatha entsha yesicelo, uma kunesidingo
Isicelo se-10 Minute
24 / 7 Ukwesekwa kwamakhasimende. Xoxa Nengcweti Ehambayo Yokusekela Ukuhambela Namuhla.
Uma isicelo sakho sokuhamba singavumelekile, Sinikeza i-100% Imbuyiselo Yokubuyisela Imali.
Ubani Ogunyazwe Ukuhamba Ngaphakathi E-United States?
Ukuvakashelwa othandekayo, noma ukuza eholidini e-United States? Kufanele uthole imvume egunyaziwe kuHulumeni wase-United States ngaphambi kokungena ezweni. Ezinye izimo, lokhu kusho ukufaka isicelo se-visa kodwa uma uyisakhamuzi sezwe elifakwe kuVisa Waiver Program (VWP), ukusebenzisa uhlelo lwe-Electronic System lokugunyazwa kwezokuvakasha (ESTA) kungenzeka kube lula nokushesha. I-VWP ivumela izakhamuzi zamazwe we-38 ukuthola imvume yokuhamba e-United States ngokusebenzisa uMnyango wezokuThuthukiswa koMakhaya ngaphandle kokuthola i-visa passort. Uma njengamanje isakhamuzi sezwe elibambe iqhaza futhi unephasikhodi evumelekile, udinga kuphela ukusebenzisa nefomu le-ESTA. Uma ufaneleka, uzoba negunya lokuhamba ngaphakathi kwe-US ngezinsuku ze-90. Uma uhamba nge-United States endleleni eya kwelinye izwe, usadinga ukufaka isicelo se-ESTA.
Isicelo se-Visa ye-Electronic Vs. Isicelo se-ESTA.
Izidingo ze-ESTA ngaphansi kohlelo lwe-Visa Waiver Program (VWP) lwe-Visa Waiver Programs aludingi kakhulu kunezo zokusebenza ezingekho ngaphansi kwamanye amazwe. Isicelo se-Visa sidinga cishe ihora elilodwa noma ngaphezulu ukugcwalisa lonke ulwazi lokuhamba nomlando ngawe. Vs. uhlelo lokusebenza lwe-ESTA lungamaminithi angu-10.
Izinjongo zokuhamba uma usebenzisa isicelo se-ESTA
Uma ufaka isicelo se-ESTA, isetshenziselwa ukubonwa abathandekayo, ukuvakashelwa, ukuvakashelwa odokotela, futhi efanelekile ukuvakasha kwamabhizinisi amaningi e-United States of America. Ezinye izinhloso zokuhamba zamukelwa, kuyilapho ezinye zidinga isicelo seVisa esigcwele.
Ukuvakasha, Amatende, kanye neSayithi Ukubona
Ukuvakashelwa kwePaki Ukuvakashelwa
Abathandekayo abavakashelayo noma abangane
Amakholeji okuvakasha ngaphambi kokufaka isicelo sokuba iVisa ihambe
Ukwelashwa Kwezokwelapha kanye nokuvakasha kukaDokotela
Imicimbi yezenhlalakahle, ama-Concerts, noma ama-meetups weqembu lesevisi
Ukubamba iqhaza emidlalweni, emidlalweni, ezemidlalo, nanoma yikuphi uhlobo olufanayo lwemincintiswano noma imicimbi, (Awukwazi ukukhokhwa ukuba iqhaza)!
Imihlangano yokubonisana kwebhizinisi nemabhizinisi
Ukubamba iqhaza emfundweni, engqungqutheleni yobuchwepheshe, nanoma yiluphi uhlobo lomhlangano. I-Eg Comic Con
Ukuqeqeshwa komsebenzi wesikhashana (Angeke akhokhwe nganoma imuphi umthombo e-USA ngaphandle kwezindleko ezihambisana nokuhlala kwakho)!
Izicelo ze-Visa zidinga ukuhamba e-United States of America uma:
Umsebenzi Wesikhathi Esigcwele
I-Long -Term Educational, College, noma Technical College
Noma yiyiphi intatheli engaphandle, cindezela, ifilimu, umsakazo noma enye imidiya yolwazi
Ngifuna ukuhlala unomphela e-United States of America
Ingabe Udinga i-ESTA For Transit Through The USA?
Uma isakhamuzi esingewona wase-US sidlula t kanye nokuqhubekayo tukudlulisela phambili the I-united states, angadinga ukuhamba okulungile I-C-1 visa, ngaphandle kokuba isakhamuzi sezwe esinesivumelwane ne I-united states evumela izakhamizi zabo ukuba zihambe I-united states ngaphandle a I-visa .
Ngidinga i-visa yokuxhuma indiza e-USA?
I-the united states UMnyango Wezokuphepha Komhlaba udinga show Abahambi be-Waiver Program (VWP) ukuthola imvume evela ku- I-Electronic System Yokugunyaza Ukuhamba (ESTA) okungenani amahora we-72 ngaphambi kokungena ngemvume Okwe ukushayela e-US noma ukuxhuma nge-US E-EST kuyadingeka.
Ingabe ngidinga i-visa uma ngine-layover e-USA?
Ukuhamba okusheshayo nokuqhubekayo kusho ukuthi uhambo lwakho oluya endaweni yakho yokugcina luhlanganisa a i-layover e-United States futhi kuzodingeka ume lapho, kodwa awunamanye amalungelo. Kodwa-ke, uma usuvele une-V-1 noma i-B-2 visa ye-US, futhi kufanele udlule ezweni lonke, awudingi i-visa ye-C.
Yiziphi Amazwe adinga i-ESTA E-Passports E-USA?
Izivakashi zingase zihlale izinsuku ezingu-90 e-United States okuyinto futhi kufaka isikhathi esichitha eCanada, eMexico, eBermuda, noma eziqhingini zaseCaribbean uma ukufika kwakuse-United States. I-ESTA iyadingeka uma ifika emoyeni noma emkhunjini wokuhamba. I-Visa Waiver isebenza ngaphandle kwe-ESTA ukuguqulwa kwemingcele yomhlaba, kodwa i-VWP ayisebenzi nhlobo (i-visa iyadingeka) uma umgibeli efika emoyeni noma olwandle ku-othintekayo ongathandeki.
Kusukela ku-2016, the I-visa waiver ayisebenzi lapho kwenzeka khona umuntu ngaphambili waya e-Iran, i-Iraq, iLibya, iSomalia, iSudan, iSiriya, noma i-Yemen noma ngemuva kuka-Mashi 1, i-2011 noma kulabo abangabakhamizi ababili base-Iran, i-Iraq, iSudan noma iSiriya. Izigaba ezithile ezifana nezidiplomate, ezempi, izintatheli, izisebenzi zokusiza noma amabhizinisi asemthethweni kungenzeka ukuthi izidingo zabo ze-visa zikhishwe nguNobhala wezokuThuthukiswa koMakhaya.
Amazwe aphakanyisiwe nama-Roadmap.
Amazwe akhethwe ngesimo kuhlelo lwe-Visa Waiver Program ziphakathi "nesimo sebalazwe" nesimo sokufaneleka sokubamba iqhaza. Ukuqokwa kuqala ukuhlolwa okuningiliziwe ngu UMnyango Wezokuphepha WaseMelika yezokuphepha ezweni kanye nokuthutha kwezwe elikhethiwe. Ayikho umugqa wesikhathi esinqunyiwe wokuthi izwe lingase lihlale isikhathi esingakanani kuhlu olukhethiwe ngaphambi kokuthi lugunyazwe noma lunqatshelwe ohlelweni.
Kusukela ku-2005, uMnyango Wezezwe wase-US uye waqhuba izingxoxo namazwe abizwa ngokuthi "amazwe ebalazwe emgwaqweni," anesithakazelo sokujoyina (noma ukujoyina) i-VWP. Emazweni okuqala we-19, i-10 iye yangeniswa ku-VWP.
Ukufaneleka kwe-visa waiver kungase kuhoxiswe noma kunini. Lokhu kungenzeka uma i-United States ikholelwa ukuthi izakhamuzi zezwe elithile zinamathuba amaningi kunaphambili ukwephulwa kwemingcele yabo ye-VWP, njengokusebenza ngaphandle kwemvume noma ukuchitha isikhathi sabo sokuvunyelwa sokuhlala e-United States. Ngalokho, Argentinaukubamba iqhaza kwi-VWP kwaqedwa ngo-2002 ngenxa yezinkinga zezezimali ezenzeka kuleli zwe kanye nomthelela walo onamandla ekuthumeni kwabantu abaningi kanye nokuqothulwa okungemthetho kwezakhamizi zayo e-United States ngendlela ye-VWP. Uruguayukubamba iqhaza ohlelweni kukhishwe ku-2003 ngezizathu ezifanayo. Nakuba ukuma kwezwe kwezombangazwe nezombusazwe kungaboni ngokuqondile ukufaneleka kwayo, kuboniswa kabanzi ukuthi izakhamuzi zezwe ezithuthukile nezombusazwe ngeke zikhuthaze kakhulu ukufuna umsebenzi futhi ziphule i-visa yazo ngenkathi e-US, izingozi ze-consul kubheka ngokuvuma noma ukuphika i-visa. Israel ayizange ifakwe ku-VWP kubikwa ngokwengxenye ngenxa yokuhlolisiswa kwayo okuqinile AmaPalestina aseMelika aseMelika, ngaleyo ndlela engagcwalisi imfuneko yomthetho.
The iyuniyani yase-Europe uye wacindezela i-United States ukuba inikeze uhlelo lwe-Visa Waiver Program emazweni ayo angamalungu ayisihlanu asele angakabikho kuwo: EBulgaria, eCroatia, eCyprus, ePoland, futhi Romania. Konke lokhu kuyi "amazwe emabalazwe omgwaqo" ngaphandle Croatia, esanda kujoyina i-EU ku-2013. NgoNovemba 2014 the Uhulumeni waseBulgaria umemezele ukuthi ngeke kuqinisekiswe ukusebenzisana kweTransatlantic Trade and Investment ngaphandle uma i-United States iphakamise i-visa izakhamizi zayo.
Ingabe Izakhamuzi zaseYurophu zidinga i-Visa E-USA?
Izakhamizi zaseBrithani ukuhamba ngendlela evumelekile, umshini ngamunye ofundekayo noma e-passport, ngokubuyisela noma ithikithi eliya phambili, futhi ngubani ohlala ezinsukwini ezingaphansi kwe-90, afanelekele I-Visa Waiver Program futhi kungaba i-visa yokuhamba-free with an I-Electronic System Yokugunyaza Ukuhamba (i-ESTA).
Ingabe izakhamizi zase-US zidinga i-EU visa yokungena eYurophu? Izakhamuzi zase-United States ezinephasiwedi evumelekile yase-US zingahamba Amazwe alungu lama-26 aseYurophu Indawo yeSchengen yezinsuku eziyi-90 ngaphandle kokufaka isicelo noma ukuthola iSchengen i-visa yokuvakashelwa okwesikhashana noma uhambo lwebhizinisi.
Ukuvakashelwa othandekayo, noma ukuza eholidini e-United States? Kufanele uthole imvume egunyaziwe kuHulumeni wase-United States ngaphambi kokungena ezweni. Ezinye izimo, lokhu kusho ukufaka isicelo se-visa kodwa uma uyisakhamuzi sezwe esifakiwe Uhlelo lwe-Visa Waiver Program (VWP), usebenzisa i I-Electronic System Yokugunyaza Ukuhamba (ESTA) kungenzeka kube inketho elula futhi esheshayo.
Ingabe i-ESTA iVumelekile Ukuhamba Ngezinyathelo Eziningi?
Your ESTA ukugunyazwa ngokuvamile evumelekile ukuhamba okuningi ngaphezu kwenkathi yeminyaka emibili (kuqala usuku ovunyelwe ngalo) noma kuze kube yilapho iphasiwedi yakho iphelelwa yisikhathi, noma yikuphi okuza kuqala *. Lokhu kusho ukuthi uma nje uthola i ESTA ukugunyazwa travel, akudingeki usebenzise kabusha ngesikhathi ukufaneleka isikhathi. Izidingo ze-ESTA ngaphansi kohlelo lwe-Visa Waiver Program (VWP) lwe-Visa Waiver Programs aludingi kakhulu kunezo zokusebenza ezingekho ngaphansi kwamanye amazwe. Uhlelo lokusebenza lwe-Visa ludinga cishe ihora elilodwa noma ngaphezulu ukugcwalisa lonke ulwazi lokuhamba nomlando ngawe futhi kufanele ulinde izinyanga ngaphambi kokuvunyelwa. Vs. the Isicelo se-ESTA ingamaminithi angu-10.
Ingakanani Izindleko ze-ESTA?
Ukusebenzisa amasevisi wethu wokubukeza nokucubungula we $ 89.00 USD. Izindleko zihlanganisa imali edingekayo kahulumeni wase-US ye-$ 14 (cishe nge-£ 9) ngomuntu ngamunye, futhi kufanele ikhokhwe ngekhadi lesikweletu. Uma isicelo sakho senqatshelwe, sidinga kuphela i-$ 4. (okushiwo eMthethweni Wokukhuthazwa Wokuhamba, i-2009)
Kwenzekani Uma i-ESTA yakho ithola?
Uma umhambi ephikiswa ukugunyazwa kwe-ESTA futhi izimo zakhe azizange zishintshe, isicelo esisha sizophikwa. Umhambi ongafanelekile ku-ESTA akafanelekile ukuhamba ngaphansi kohlelo lwe-Visa Waiver Program futhi kufanele afake isicelo se-visa engekho emmangweni ku-a US Embassy noma Ihhovisi.
Kuthatha isikhathi eside kangakanani ukuthola i-ESTA?
An Isicelo se-ESTA sinefomu elingu-10 (i-10) lesigidi futhi sisetshenziswe ngaso leso sikhathi ku-intanethi. Iningi lezicelo zivunyiwe kungakapheli iminithi yokuthumela. Noma kunjalo, kunezimo lapho isinqumo ngesicelo singase sibambezeleke kuze kube Amahora we-72. Yingakho ube neprosesa yokubuyekeza uhlelo lwakho lokusebenza ngumkhuba omuhle kakhulu. Zonke iziphakamiso zikhokhwa kakhulu ngekhadi lesikweletu. I-ESTAmerica ingathatha enye inkokhelo yokukhokha ukuthi i-United States of America ayifuni ngaphandle.
Qala uhlelo lwakho lokusebenza Namuhla
Qala Ukuhamba Kwakho kumahora we-72
Sinikeza uhlelo lokusebenza lwe-US E-File e-Passport esheshayo futhi elula kakhulu. Vumela inhlangano yethu ye-E-filing uhlelo ngokusebenzisa imibuzo edingekayo futhi ithimba lethu lizobuyekeza uhlelo lwakho lokusebenza ngaphambi kokuyithumela eMnyangweni Wezinkampani zase-United States. I-ESTAmerica inkampani ebhalisiwe ngaphakathi e-United States.
Hlala ku-loop uma kubuyekezwa imithethonqubo ye-ESTA, Sithumela ama-imeyili ukukukwazisa ngamazwe nakuhlelo lwe-Visa Waiver Program.
Izinhlelo Zokukhokha E-Ukukhokhiswa E-Evikelekile
ESTAmerica i-ejensi yezokuvakasha yesithathu ephethe Isevisi yekhasimende le-24 / 7.
Asisiwo uHulumeni wase-United States noma ama-Customs Agents.